Izixhobo zeBlue Faucet kunye nezixhobo
IiFaucets zeKhitshi ezigqwesileyo ngo-2021 | IiFaucethi zeBathroom ezigqibeleleyo | WOWOW iiFaucets
Ikhaya / Blog / Izixhobo zeBlue Faucet kunye nezixhobo
2021 / 09 / 24 uhleloBlog 1695 0
Impompo yakho yasekhitshini yenye yezona ndawo zisetyenziswayo ekhitshini lakho. Nokuba uyathenga okanye ujonge izinto ezinokutshintsha, nantsi into ekufuneka uyazi malunga neepompo zasekhitshini.
Ikhitshi leSink yeSinki yeeNdawo zokuKhangela
Ngaphambi kokuthenga itompu entsha, inyathelo lokuqala kukufumanisa ukuba isinki iza kubekwa phi. Ubungakanani bayo, ubume bayo kunye neempawu zayo ziya kumisela ukuba yeyiphi na itephu ekufuneka ifakwe kuyo kwaye ububanzi bayo kufuneka bube njani.
Qiniseka ukuba ulinganisa ubude besiphelo. Ngokufanelekileyo, kufanele ukuba ibe phezulu ngokwaneleyo ukuba icace ipani enzulu, kodwa ingaphakamisi kangako kangangokuba amanzi ayatshiza xa ebetha isinki. Uya kufuna ukuqinisekisa ukuba kukho indawo eyoneleyo ngasemva nangaphandle kwespigot ukucoca umzimba wespigot kunye nokusebenzisa kakuhle isibambo.
Qala ngaphezulu kwetephu, eyicandelo (elihlala lenziwe ngombala). Yahlulahlula ukuhamba kwamanzi ibe yimisinga emininzi emincinci, ihlambe amanzi ngomoya. I-aerator inciphisa inani lokuhamba kwamanzi ngelixa igcina imvakalelo yomsinga woxinzelelo oluphezulu. Oku kunciphisa kakhulu isixa sokutshiza esinkini.
Ispout of the faucet yinxalenye yokuqala yabantu abayiqondayo; yinxalenye ehambisa amanzi emzimbeni isiya kwisinki. Uyilo lwayo lunokwahluka. I-spout ethe tye ibonelela ngokufikelela okude kwaye ineprofayili esezantsi. I-gooseneck spout inemilo entle, egobile. Kukulungele xa kuzaliswa izimbiza kunye neepani. Uyilo lwe-hook egobileyo lukaMalusi, njengegama layo, luzisa imfihlakalo ngelixa libonelela ngakumbi. Ispout esichaziweyo sinamalungu amaninzi, ekuvumela ukuba uhambise ukuhamba kwamanzi apho kufuneka khona.
Ngaphandle kwezi ngcinga zesitayile, kubalulekile ukuba uqikelele indlela oza kuyisebenzisa ngayo ispout sakho ekhitshini. Ukukhupha ii-spout zinomlomo obuyisekayo omisa kwispout. Ukukhupha iiprophu ziza ngeendlela ezininzi kwaye zigcinwe endaweni ngamandla.
Kwelinye icala, ii-spouts zokudonsa ezantsi (ezixhonywe kuyilo lwe-gooseneck) zifuna isiseko esitshixwayo okanye esitshixwayo ukuba sizibambe endaweni xa zingasetyenziswa. Kukwakho neziphethi ezingenazandla ezivulekileyo ngoncedo lwenyawo yeenyawo okanye isivamvo sokuhamba.
Xa kuziwa kwimibhobho yompompo yokuvula kunye nokuvala kwezivalo, ukhetho lwakho lunye okanye zimbini. Isiphatho esinye kulula ukusisebenzisela abantu bayo yonke iminyaka kunye nobuchule. Inokuxhonywa ngaphezulu kwespout, ngapha nangapha kwespout, okanye ngaphambili. Ukuba uyifaka kwicala, kufuneka umngxunya owahlukileyo. Iimpompo ezibamba ezimbini zinesiphatho esongezelelweyo sokukhathazeka, kodwa isibheno esingaphelelwa lixesha yinto enomtsalane nakweyiphi na ikhitshi.
Umzekeliso kaHarry Campbell
Ukulawula ukuhamba kwamanzi kunye nobushushu, iipompo zanamhlanje zisebenzisa iveluji yekhatriji. Idibanisa onke amalungu asebenzayo kwiyunithi enokutshintsha ngokulula (okuthetha ukuba akukho ziwasher zitshintshi). Ezinye izivingco zenziwe ngeplastiki okanye ngentsimbi. Kodwa ezona valves zibalaseleyo zineediski ezilukhuni, ezigudileyo zeceramic ezingafane zivuze kwaye zingachaphazeleka ziidipozithi zamanzi ezinzima. Ukuba iidiski zinayo nayiphi na inkunkuma kuzo, ziya kuqhekeka. Ke qiniseka ukuba ugungxula umgca wakho wokuhambisa amanzi ngaphambi kokufaka itampu yakho. (Umgca wokuhambisa amanzi udibanisa imibhobho yamanzi ashushu nabandayo endlu.)
Ivaluva zeCartridge ziyahluka ngokuxhomekeka kwindlela eyenziwe ngayo kunye nemodeli yompompo. Ukuba ufuna ukubuyiselwa, odola ngokuthe ngqo kumenzi.
Umzimba wompompo kulapho amanzi ashushu nabandayo adibanisa khona ngaphambi kokudlula kwispout. Kuyilo olunemingxunya enye, amanzi ashushu nabandayo adityaniswa ekwenziweni kwesiqwenga esinye, esinevalvu. Olu hlobo lomzimba luyafumaneka kuyilo olunye okanye oluphindwe kabini.
Kuyilo lwebhulorho, imibhobho edibanisa ezi zivalo zimbini zaxutyiweyo kunye ngaphambi kokuba amanzi ashushu nabandayo afike kwindawo yokuphuma. Olu jongo aluqhelekanga kakhulu, kodwa ngamanye amaxesha lubonwa kuyilo lwamaxesha.
Inketho yesithathu ngumzimba obanzi ofuna imingxunya emithathu. Uxuba amanzi ashushu nabandayo njengebhobho yamanzi, kodwa imibhobho ifihliwe phantsi kwekhawuntari.
Iya kuncamathiselwa phi itephu? Ukunyuka kwedesika, apho itepu incanyathiselwe kwisinki, lolona khetho luqhelekileyo. Ukuba kukho ukucoca okwaneleyo phakathi kwesinki kunye nodonga, ukufakela kulula. Ifuna umngxunya kwitafile okanye isinki.
Inketho yesibini kukulungisa itepu edongeni. Oku kunenzuzo yokukhulula indawo yokubala kunye nokwenza ukucoca kube lula. Kodwa kwimozulu ebandayo, ayisiyongcamango ilungileyo le yeendonga zangaphandle apho imibhobho inokukhenkceza.
Ukukhethwa kwezinto ezinobumba be-antique
Iitshitshisi zasekhitshini zibaluleke kakhulu ebomini bethu. Kuya kufuneka ukuba uthi awunakuphila ngaphandle kombhobho. Andazi ukuba zingaphi iipompo zeantiki, iimpompo zinesiphumo esihle sokuhombisa. Kunye nezinye iindlela zokuhombisa, yimvakalelo entle. Kodwa zininzi iimpompo ze-antique ekufuneka zinike ingqalelo kubo, ngapha koko, iipompo ze-antique zinezibonelelo ezithile kunye nezinto ezingalunganga, ngoko ke khawulezisa kwaye uyiqwalasele.
copper: Olona ncedo lukhulu kwiipompo zobhedu lwe antique kukuba zizinzile kwaye akukho lula ukususa ipeyinti. Nokuba iipompo eziqhelekileyo ze-spool kufuneka zilungiselelwe ubhedu. Ke ipompo yobhedu ekumgangatho ophezulu, oko kukuthi, yinto elungileyo kakhulu yompompo.
Yenziwe ngentsimbi eshayinayo: insimbi engenanto engenanto engenanto ininzi kwimarike. Inenzuzo yokuxhathisa ukunxiba kunye nobomi benkonzo ende. Kodwa xa ukhetha olu hlobo lwezinto, zama ukukhetha, emva kwayo yonke loo nto, intengiso ingaphantsi kweentsimbi ezingenasici.
Indawo yealuminium: le yinto entsha. Akukho lula ukurusa umbala wezinto ezizinzileyo kakhulu, kwaye kananjalo kunoncedo lokhuselo lokusingqongileyo. Kodwa isithuba se-aluminium sempompo yeemveliso zodidi oluphantsi nazo zininzi. Ukuze ube kukhetho, kuya kufuneka unike ingqalelo.
Material: ingxubevange yeZinc ibuthathaka, kodwa kulula kwakhona ukurusa ngokuhamba kwexesha. I-Zinc alloy antique faucet ayibizi kodwa ezinye iingxaki azikhuthazwa ukuba uthenge.
Ke kufuneka ulumke xa ukhetha isipili sokuhlambela. Emva kokukhetha ngononophelo, unokuba nethuba elingcono lokukhetha eyona faucet. Ukuqaliswa koompompo bezinto zakudala phantse kugqityiwe apha, ukuba unemibono eyahlukeneyo inokubekwa phambili kwaye kwabelwane ngayo nawe.
Ndwendwela indawo yentengiso yemephu enikezela ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngamaxabiso aphezulu. Funda ngakumbi malunga neepompo ezibiza kakhulu kunye negama njengoko unokukhetha kuluhlu olubanzi lweefomathi ze-LED ezingabizi kakhulu ezikhoyo kwintengiso.
Ngaphambili :: Ukufaka iikhabhathi zegumbi lokuhlambela ngale ndlela kuthathwa njengeklasikhi. Ukuphucula ukungcamla ukuze ufumane amanqaku apheleleyo! next: Indawo yokuphekela Indawo yokupompa-Ukukhetha elungileyo
Iipompu zegumbi lokuhlambela leNickel eliCociweyo-Ukhetho olufanelekileyo kuwe
2021 / 09 / 28 3003
Yenza isicwangciso sokuhombisa ngeSink yokuhlambela ngeeBhafu
2021 / 09 / 27 2924
Ukufumana u-plumber kunye neengcebiso ngemibhobho yokunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi
2021 / 09 / 25 3214
Iingcebiso ngokugcina iiBhobho zakho zangasese zingenabala kwaye zivuza simahla
2021 / 09 / 25 5140
Yenza ikhitshi lakho licoceke ngeeMpompo zeKhitshi
2021 / 09 / 24 3290
Indawo yokuphekela Indawo yokupompa-Ukukhetha elungileyo
2021 / 09 / 24 3176